News - Gini bu uzo oru uzo abuo nke ngosi LCD?
Gịnị bụ ihe abụọ nkịtị teknuzu oke nke LCD ngosipụta?
1. Ihe dị iche
Njikwa IC eji mee ihe maka imepụta ihe ngosi LCD ories Ngwa dị ka nzacha na nghazi ihe nkiri, Ọ metụtara ọdịiche nke panel, Maka ndị ọrụ n'ozuzu, Ihe dị iche nke 350: 1 ezuola, Otú ọ dị, ọdịiche dị otú ahụ na ọkachamara ubi enweghị ike izute mkpa nke ndị ọrụ. Tụnyere CRT Monitors mfe iru 500: 1 ma ọ bụ ọbụna elu iche ruru, Naanị elu-ọgwụgwụ LCD Monitors nwere ike nweta ọkwa a. Ihe nlele LCD nke ụdị ọkwa mbụ dịka Samsung, Asus, LG, wdg na ahịa nwere ike iru ogo 1000: 1 dị iche. Mana n'ihi na o siri ike iji ngwa ahụ tụọ ya iche, yabụ mgbe ịhọrọ, ị ka ga-ahụ ya n'onwe gị.
Iche dị ezigbo mkpa, enwere ike ịsị na nhọpụta nke ihe ngosi nke kristal mmiri dị mkpa karịa ntụpọ na-enwu gbaa, Mgbe ị mụtara na ndị ahịa gị na-azụ LCD maka ntụrụndụ na ikiri ihe nkiri, can nwere ike imesi ike na ọdịiche dị mkpa karịa mba nwụrụ anwụ pikselụ, Mgbe anyị na-ekiri gụgharia ly N'ozuzu, nchapụta nke isi iyi ihe nkiri ahụ abụghị nnukwu, Mana iji hụ ọdịiche nke ìhè na ọchịchịrị na ọnọdụ agwa, Ntutu ntutu na-agbanwe site na isi awọ gaa oji, Ọ dabere na ọkwa dị iche. Na ule nyocha nke 256-larịị na sọftụwia nyocha, enwere ike ịhụ obere grid grey ka o doo anya mgbe ị na-achọ, ya bụ, ọdịiche dị mma!
LCD mmiri mmiri kristal ihuenyo bụ a umi n'etiti siri ike na liquid.The ike emit ìhè site n'onwe ya, Ihe ọzọ ìhè isi bụ mkpa. Ya mere, Ọnụ ọgụgụ nke oriọna metụtara ìhè nke LCD. Ihe ngosi mmiri kristal mbụ nwere naanị oriọna abụọ dị elu na nke ala, Nke kachasị ala nke ụdị ewu ewu bụ ọkụ anọ. Elu-elu-ya bụ ọkụ isii. A na-ekewa oriọna oriọna ahụ ụzọ atọ: Otu bụ ọkpọkọ na nke ọ bụla n'akụkụ anọ, mana ọghọm bụ na a ga-enwe onyinyo ọchịchịrị n'etiti, Ihe ngwọta bụ ịhazi ọkpọ ọkụ anọ ahụ site na elu rue ala. Nke ikpeazu bu ihe ngosi “U”, N’ezie, ha bu tubes abuo nke oriọna abuo meghariri. Ọdịdị oriọna isii ahụ na-eji oriọna atọ eme ihe n'ezie, Onye nrụpụta ahụ gbanyere tubụ ọkụ atọ niile n'ime ọdịdị "U", wee debe ha Iji nweta mmetụta nke ọkpọ isii ahụ.
Ìhè bụkwa ihe ngosi dị mkpa karị, LCD na-enwusi ike na-egosi ndị mmadụ n'ebe dị anya, kwụpụta n'ahịrị nke mgbidi LCD technology Ihe ngosi a na-ahụkarị nke anyị na-ahụkarị na CRT bụ ịbawanye ugbu a nke mkpuchi nkpuchi mkpuchi. Bombard na phosphor, Na-arụpụta a chawapụrụ mmetụta, dị otú ahụ technology, Ohaneze na-efu nke oyiyi mma, Na mgbanwe nke ndụ nke ileba anya, All ngwaahịa n'ịkpa ụdị nke a na nkà na ụzụ na-n'ozuzu na-enwu gbaa ndabara, Mgbe niile pịa a bọtịnụ imezu, Pịa 3X na-egwu egwuregwu ; Pịa ọzọ ịgbanwe ka 5X ihie na-ekiri ndị DVD, Mgbe m anya ọma, ọ na-bịara ikiri. Iji lee ederede ahụ, ị ​​ga-alaghachi n'ọnọdụ ederede nkịtị. Nke a haziri n'ezie na-egbochi onye ọ bụla site na iji pụta ìhè. Principlekpụrụ nke ngosi LCD na-egosipụta nchapụta dị iche na CRT. A na-enweta ha site na nchapụta nke ọkụ ọkụ ọkụ n'azụ panel. Yabụ na enwere ọtụtụ oriọna oriọna, ọkụ ga-adị otu. Ma ogwe niile na-enwu gbaa ga-enwe mmerụ ahụ na-egbu egbu, Ihuenyo ga-enwu ọkụ, Icha ọkụ na-ezo aka n'okpuru ihuenyo ojii kpamkpam, LCD abụghị oji, Ọ dị ọcha na isi awọ. Ya mere, a ezi LCD ekwesịghị blindly mesie ihie, Kama, mesie ihe dị iche ọzọ.